to read - Double099 - Wattpad
#adventure #fantasy #action #translation #myanmar
My classmate found out I'matrap and ask me to date with him! [Own Creation]
45.8K 6.8K 11
Two teenager boys. A sweet love story with no drama. A fresh love story.
Schmaltz [Own Creation]
200K 23.7K 46
Schmaltz means artistic works, such as music or writing, that are intended to cause strong sad or romantic feelings but have no real artistic value. He who create empty Schmaltz but when his character comes into life, will his works are still empty?
Eaftós Mania [OwnCreation]
47.6K 5K 20
Love yourself... we usually talk to each other. So what abt we love ourself with Obessive love. The only one who can fill my void is me. That's what he said.
Rupture [Own Creation]
471K 66.4K 119
သေဆုံးခြင်းဆိုတာ သေချာပေါက် အဆုံးသတ်တစ်ခုဟုတ်ပါရဲ့လား။ ဘဝရဲ့ရှင်သန်ခြင်းက ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတယ်လို့ သူမ ထင်ခဲ့တယ်။ အဟ! စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေက သေဆုံးပြီးမှ စတာပဲ။
Beloved Hyung [Own Creation]
394K 57.7K 43
I love you so much. All you need to do is accept me. Mature content on just because ofafew chapters. I don't want to put on Mature tab because of ppl think this work includealot smutty things. But still I've to because of two or three chapters. Enjoy~
ကိုယ်ဟာ မင်းရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော
7.3K 259 1
ကျွန်မက အဓိကဇာတ်ဆောင် မင်းသမီးနဲ့ ဘုရင်မပလ္လင်ကို လုနေတာပေါ့ ကျွန်မ, Yurina Carthia, ဗီလိန်မမ, အရံဇာတ်ဆောင်ရဲ့ လက်ထဲမှာ သေခဲ့ရတယ် အဲ့ဒါကြောင့် အဓိကဇာတ်ဆောင်မင်းသမီး သူ့ကို မပိုင်ဆိုင်ခင် အရံဇာတ်ဆောင် လူငယ်လေးကို မိဘမဲ့ဂေဟာမှာ သွားရှာပြီး ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ပြီးတော့ ကျွန်မဘေးမှာ ဆွဲထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်. "Ray, ကျွန်မ ဒီ...
5. ဒုတိယ ဇာတျလိုကျအားရှေးခယျြခွငျး ARC-3 (သွရိုမနျ)
266K 24K 20
ကွိုးပမျးပွီးမရရှိနိုငျတဲ့အခဈြကို ငါဟာ မနားလညျနိုငျဘူး... တဈစုံတဈယောကျကို ဘ၀ကွီးအပျနှငျးပွီး မတ်ေတာမြှဖို့ဆိုတာ ရူးနမျးနကွေတဲ့ လူတှရေဲ့အလုပျပဲ... မငျးရဲ့တညျရှိမှုကို သိတောငျမသိတဲ့သူတဈယောကျကို ပေးဆပျခွငျးဆိုတာ ရကောကျ နှခြောငျးငငျ ၀ဈဆံနှဈလုံးပေါကျနဲ့ ရူးနှမျးမှုဆိုတာ နားလညျကွရဲ့လား... "မချစ်ဖူးတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပ...
ကောင်းကင်ဘုံ စာကြည့်တိုက် စာစဉ် ၁၁ မှ ၁၈
559K 87.7K 104
မူရင်း - Library of Heaven's Paht မူရင်း စာရေးသူ - Heng Sao Tian Ya ဘာသာပြန်သူ - DrZone All credit goes to original author. Follow my translations on facebook and Wunzinn Book Store ( facebook page name- Personal Sketch)
7. ဒုတိယဇာတျလိုကျအား ရှေးခယျြခွငျး Arc-5 (အားလျရဈခကျြထျ)
182K 19.5K 17
149K 16K 51
(BL) The Legendary Master's Wife By Yin Ya(尹琊) (Myanmar Translation From Chapter 202 To Chapter 377) From English Translation (Exiled Rebels Scanlations)
ABO world ( Arc 11 FOD ) (completed)
436K 44.4K 59
This is for FOD arc 11 myanmar translation. I don't own the story !! i'm just translate for myself and other who interested in reading mm translation for FOD. This Arc is about ABO world.
Copying Immortal Cultivation - FOD Arc 12 Translation (completed) (U&Z)
329K 41.8K 67
This story is for FOD Arc 12 myanmar translation!! All the storyline go credit to original author!! You can read this at www.novelsupdate.com This is about Xianxia World......
Mr.Villain Please Give Me Your Love
128K 11.9K 25
System: Host မင်းရဲ့ကမ္ဘာကိုပြန်သွားချင်လား? လင်းရွှယ်:မေးနေစရာလား! ငါ့ကိုခေါ်လာတာနင်ဘဲလေ နင်သိမှာပေါ့ System: ကောင်းပြီ။ မင်းရဲ့ကမ္ဘာကိုပြန်သွားချင်ရင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ် ဘယ်လိုလဲ? လင်းရွှယ်:တာဝန်? ပျင်းစရာကြီး... System:''...'' System: တာဝန်တစ်ခုတိုင်းမှာ မဖြစ်မနေပါတဲ့တာဝန်ကတော့ ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဗီလိန်ကို ချစ်အောင် ဆွဲဆောင်ဖိ...
16.1K 710 4
ငါ့ဘဝဟာ ပျောက်ကွယ်ဖို့ စတင်မှေးမှိန်တဲ့အချိန် ရောက်ရှိလာတယ်.. ။ ငါ့ရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ အသံ တစ်ခုကို ကြားခဲ့တယ်.. ။ [ System ဟာ Host ကို ဆက်သွယ်ခြင်း စတင်ပြုလုပ်နေပါသည်.. ။ ဆက်သွယ်ခြင်း ပြီးဆုံး..။] ဟမ်..! ခဏ..! System ကဘာကြီး??? ... ဝှက်သယ်ဖာ့စ်... ။ ပြီးတာနဲ့ ငါ့ဘဝကြီးကလည်း ပျောက်သွားပြီး ငါ့ရဲ့ ဝိဥာဏ်ဟာလည်းပဲ ဝဲဂယက်တစ်...
1.ဒုတိယ ဇာတျလိုကျအားရှေးခယျြခွငျး ARC-4 (ခြိုကျရှမျး)
345K 31K 25
ကြိုးပမ်းပြီးမရရှိနိုင်တဲ့အချစ်ကို ငါဟာ မနားလည်နိုင်ဘူး... တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဘ၀ကြီးအပ်နှင်းပြီး မေတ္တာမျှဖို့ဆိုတာ ရူးနမ်းနေကြတဲ့ လူတွေရဲ့အလုပ်ပဲ... မင်းရဲ့တည်ရှိမှုကို သိတောင်မသိတဲ့သူတစ်ယောက်ကို ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာ ရကောက် နှချောင်းငင် ၀စ်ဆံနှစ်လုံးပေါက်နဲ့ ရူးနှမ်းမှုဆိုတာ နားလည်ကြရဲ့လား... "မချစ်ဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး...
8. ဒုတိယဇာတျလိုကျအား ရှေးခယျြခွငျး Arc-1 (လငျဟနျ့)
305K 31K 22
ကွိုးပမျးပွီးမရရှိနိုငျတဲ့အခဈြကို ငါဟာ မနားလညျနိုငျဘူး... တဈစုံတဈယောကျကို ဘ၀ကွီးအပျနှငျးပွီး မတ်ေတာမြှဖို့ဆိုတာ ရူးနမျးနကွေတဲ့ လူတှရေဲ့အလုပျပဲ... မငျးရဲ့တညျရှိမှုကို သိတောငျမသိတဲ့သူတဈယောကျကို ပေးဆပျခွငျးဆိုတာ ရကောကျ နှခြောငျးငငျ ၀ဈဆံနှဈလုံးပေါကျနဲ့ ရူးနှမျးမှုဆိုတာ နားလညျကွရဲ့လား... "မခဈြဖူးတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပ...
The Robber Demon King and The Hedgehog Bride
50.7K 5.7K 24
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်က ကောင်းကင်ဘုံဧကရာဇ် Mo YunYe မှာ မိစ္ဆာဘုရင် Nan LiYueအား စစ်ရှုံးခဲ့သည်။ သူ၏နတ်စစ်သည်များအား ကာကွယ်နိုင်ရန် သူ၏ဇနီးလောင်း Luo QianHuaနှင့် အလဲအလှယ်လုပ်ခဲ့ရသည်။ သိပ်မကြာသောအချိန်အတွင်းမှာပင် မိစ္ဆာများကြားမှ ကောလဟာလတစ်ခုက ကောင်းကင်ဘုံသို့ ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။ Luo QianHuaမှာ မိစ္ဆာဘုရင်၏ နှိပ်...
3. ဒုတိယ ဇာတျလိုကျအားရှေးခယျြခွငျး ARC-2 (အနျဒိုခိုငျး)
324K 31.3K 23
35.4K 3.1K 14
လွန်ခဲ့သော ခုနှစ်နှစ်က၊ သူတို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပြီးနောက်မှာ သဲလွန်စတောင် မချန်ဘဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူက အခုတော့၊ သူမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲအကြို မတိုင်ခင်မှာ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပြီး၊ ဖိအားပေးခဲ့တာက သူ့ကို လက်ထပ်ရမယ်တဲ့လေ။ လက်ထပ်မှတ်ပုံတင်တစ်ခုနဲ့ ချည်နှောင်ပြီး သူမကို ကြင်နာစွာနဲ့ သူ့နားမှာ နေစေခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်ကစပြီး၊ ဒီ စင်ဒရဲလားလေးရဲ့...
319K 38.9K 43
Author(s): 很是矫情 English translator: Butterfly's Curse English title: Quick Transmigration Cannon Fodder's Record of Counterattacks Original name: 快穿之炮灰女配逆袭记 Realm3: Chairman's wife Genre:Action,Adventure,Comedy,Fantasy ,Gender Bender,Martial Arts,Sci-fi Cover photo is from O.ne [Permission granted from English tran...
ဒိုရီယန်ဂရေးရဲ့ ပုံတူပန်းချီကား (Completed)
6.7K 549 21
The Picture of Dorian Gray သည် Oscar Wilde က Lippincott လစဉ် မဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးသားခဲ့သော Gothic ၀တ္ထု အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး July 1890 တွင် အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသင့်တော်သော ဇာတ်လမ်းဖြစ်မှာစိုးသောကြောင့် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာက Wilde ကို အသိမပေးဘဲ စာမူကြမ်းတွင် စာစုငါးရာကျော် ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့သည်။ (ယခု ဘာသာပြန်က OM KIDZ က...
Nirvana Mountain (နိဗ္ဗာန်တောင်)( မြန်မာ sub)
211K 18K 72
This story describes the live of gods and monsters Living together. There are2masters and3disciplines living together on mount Nirvana. Master Guan,who is sometimesaman and sometimesawoman. Master Tang, who is plagued by strange thoughts; Sun Wu an incredibly handsome chap; Baianaughty and outgoing girl; and...
7.9K 811 20
စာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ရုပ်ရှင်နဲ့တော့ မူကွဲပါလိမ့်မယ်။eskill ၀ိတာကြောင့် ကြိုးစားပြီးပြန်ကြည့်ထားပါတယ်။ (၁၉)ပိုင်းပဲ ရှိတာမို့ မြန်မြန်ပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သတျဖွတျသူသှေးနတျဘုရား(ရှီယနျ)[Zawgyi + Unicode]
347K 30.9K 201
#သတ်ဖြတ်သူသွေးနတ်ဘုရား (မိတ်ဆက်) (God of Slaughter) Author :Ni Cang Tian Translate by : Soe Paing Hmue "မိတ်ဆက်" သတ်ဖြတ်သူသွေးနတ်ဘုရား (God of Slaughter) စာစဉ်သည် 18+ အမျိုးအစား တရုပ်သဘာဝလွန်ဝထ္ထုဖြစ်ပါသည်။အပိုင်း ၁၂၀၀ကျော် ဆက်သွားနေဆဲဇာတ်လမ်း။ ဤစာစဉ်၏ဇာတ်လိုက် ရှီယန်သည် ပြင်းထန်သောအားကစား Extream Sport(ဥပမာ ကျောက်တော...
95K 14.6K 27
ဥာဏ်​များလွန်း​သော ခင်​ပွန်းသည်​(ဉာဏျမြားလှနျးသော ခငျပှနျးသညျ)
103K 11.9K 22
​ဖေ့ကျင်းသည်​ ဝမ်းတွင်းမည်းမင်းသားတစ်​ပါး...အပြင်​လူ​တွေအမြင်​မှာတော့ သူက တည်​ငြိမ်​​အေး​ဆေးပြီး ကြင်​နာတတ်​​သော လူကြီးလူ​ကောင်းတစ်​​ယောက်... ရန်​ရှီနဉ်​က​တော့ သိုး​ရေခြုံ​နေ​သော ဝံပု​လွေတစ်​​ကောင်​ဖြစ်​သည်​...အပြင်​လူ​တွေအမြင်​မှာ​တော့ သူမဟာ နူးညံ့သိမ်​​မွေ့ပြီး ကျိုးနွံတတ်​​သော သခင်​မ​လေး... ​ဖေ့ကျင်းနှင့်​ ရ...
System vs Villain (own creation)
143K 15.8K 24
System...'' Host မင်းလိုရာ တစ်ခုတောင်းပါ'' Host '' ကမ္ဘာအစစ် '' system...'' တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချသည်...'' Host. ''.....'' ''ဘာကိစ္စ လာမေးနေလဲမပေးနိုင်ရင်လဲ.....နင့်ငုံးဥ.... ##$@###@$$$$'' System. ''ကမ္ဘာသစ်ကူးပြောင်း နေသည်..''
Midnight Flower (Season 1)
သန်း​ခေါင်​ယံအချိန်​မှာ ပွင့်​တဲ့ ပန်းတစ်​ပွင့်​ဟာ တခြားပန်း​တွေထက်​ ပိုမိုလှပတယ်​ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်​...ဒါ​ပေမယ့်​ သူတို့က အဆိပ်​​တွေနဲ့ ပြည့်​နှက်​​နေတယ်​ဆိုတာ​ကော သိကြပါရဲ့လား Own Creation Not Translation Starting date Oct52018 The First Season of Masquerade Series Cover by @Whiteri Puretty
Midnight Flower (Season 3)
2.7K 415 10
သန်းခေါင်​ယံမှာ အလှဆုံးပွင့်​ခဲ့တဲ့ ပန်းတွေလည်း မိုးသောက်​ချိန်​ရောက်​ရင်​ ကြွေလွင့်​သွားရတာ သဘာဝပါပဲ။ Final Season of Masquerade Series. Own Creation Not Translation Starting Date 26 April 2019 CV byHarley Robbie
7.3K 1K 9
Beyond death, you will realize the truth of everything. Own Creation not Translation Starting Date 7.5.2019 Cover By @Alynn_Mhe